कोरोनाको अर्को खतरनाक स्वरूप 'नियोकोभ', ३ जनालाई लाग्दा १ को मृ-त्यु !
कोरोनाको अर्को खतरनाक स्वरूप ‘नियोकोभ’, ३ जनालाई लाग्दा १ को मृ-त्यु !
काठमाडौं । ओमिक्रोनपछि अब संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट नियोकोभले विश्वमा चिन्ता बढाएको छ। यसबारे चीनको उहानका वैज्ञानिकले ठूलो दाबी गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार यो भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको हो। यसको संक्रमण र मृत्यु दर दुवै धेरै उच्च छ। यसले प्रत्येक तीन बिरामीमध्ये एक जनाको ज्यान लिन सक्छ। उहान त्यही सहर हो, जहाँबाट सन् २०२० मा कोरोना महामारी फैलिएको थियो।
रुसी समाचार एजेन्सी स्पुतनिकका अनुसार भने यो भेरिएन्ट नयाँ होइन। यो भेरिएन्ट मार्स कोभ भाइरससँग सम्बन्धित छ। यसका बिरामी पहिलोपटक पश्चिम एसियाली देशहरूमा सन् २०१२ र २०१५ मा भेटिएका थिए। यो नियोकोभ भेरिएन्ट भर्खरै दक्षिण अफ्रिकामा चमेरामा देखिएको हो। पहिले जनावरमा पनि देखिएको थियो।
bioRxiv वेबसाइटमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार निओकोभ र यसको सहयोगी भाइरस PDF-2180-CoV ले मानिसलाई संक्रमित गर्न सक्छ।
उहान युनिभर्सिटी र चाइना एकेडेमी अफ साइन्सेसका शोधकर्ताहरूका अनुसार यो नयाँ भाइरसमा मानव कोशिकालाई संक्रमित गर्न केवल एक म्युटेसन भए पुग्छ।
अर्कातर्फ रुसको भाइरोलोजी र बायोटेक्नोलोजी विभागले भने अहिले यो भेरिएन्ट मानिसमा फैलिने सम्भावना कम रहेको बताएको छ। यसको सम्भाव्यता र जोखिमबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
चीनका वैज्ञानिकको चेतावनी
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभलाई लिएर चीनका वैज्ञानिकले विश्वलाई चेतावनी दिएका छन् । यो भेरियन्टको बारेमा शोध गर्ने वैज्ञानिकले भनेका छन्, ‘यो नयाँ भेरियन्ट एकदमै बढी संक्रामक र खतरनाक छ ।’
वैज्ञानिकले यस नयाँ शोधलाई वेबसाइटमा प्रकाशित गरेका छन् । शोधपत्रमा भनिएको छ, कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभ र त्यसको सहयोगी भेरियन्ट पीडीएफ–२१८० कोभले मान्छेलाई एकदमै तीव्र रुपमा संक्रमित गर्न सक्छ । यस सोधमा लेखिएको छ, यस भाइरसको संक्रमण हुने तीनमध्ये एक जनाको मृत्यु हुनसक्छ ।
वुहान विश्वविद्यालय र चाइना एकेडेमी अफ साइन्सेसका वैज्ञानिक र शोधकर्ताले नियोकोभ भाइरसबारे चेतावनी दिएका हुन् । वैज्ञानिकका अनुसार कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट नियोकोभले मानिसलाई संक्रमित बनाउन केवल एक म्युटेसन भए पुग्छ ।
चीनका वैज्ञानिकले चेतावनी दिएसँगै रुसका सरकारी भाइरोलोजी शोध केन्द्रले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । रुसका सरकारी भायरोलोजी शोध केन्द्रका अनुसार चीनका वैज्ञानिकले जारी गरेको आँकडा अनुसार उक्त भेरियन्ट अहिलेसम्म मान्छेलाई संक्रमित गर्न सक्षम छैन । उनीहरुले यसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप खोज अनुसन्धानको जरुरी छ ।
दक्षिण अफ्रिाकाको चमेरामा भेटिएको थियो नयाँ भाइरस
कोरोनाको यो नयाँ भेरियन्ट दक्षिण अफ्रिकामा पाइएको हो । यस भेरियन्टको पुष्टि अहिलेसम्म चमेरामा मात्र भएको छ । वुहान युनिभर्सिटी र चाइनीज एकेडेमी अफ साइन्सेस, इन्स्टिच्युट अफ बायो फिजिक्सका वैज्ञानिक एवं शोधकर्ताले भनेका छन्, अहिले यो भाइरस पंक्षीमा देखिएको भएपनि यसले मान्छेलाई संक्रमित गर्न सक्छ ।